News desk – News Dainik
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:३७ समाचार
काठमाडाैँ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा रहेको गोकुलेश्वर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्न खोज्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले नवजात शिशुको मृत्यु भएको भन्दै आइतबार अस्पतालमा तनाव सृजना भएको थियो । मृतक शिशुका आफन्तले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्न खोज्ने बैतडी डिलासैनी गाउँपालिका-६ का ३० वर्षीय लोकेन्द्रनाथ योगी र ३० वर्षीय नरेन्द्रनाथ योगीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर …
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:१६ आर्थीक
काठमाडौं । सोमबार सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ७ सयले घटेर ९३ हजार २ सयमा नै कारोबार भइरहेको छ । यसअघि आइतबार छापावाला सुन तोलाको ९३ हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ७ सय रहेको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य भने तोमाला ५ रुपैँयाले घटेर प्रतितोला १३६५ मा कारोबार …
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:४५ समाचार
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि खनाललाई सोमबार बिहान थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको हो । केही दिनदेखि लगातार ज्वरो आएको थियो भने रगतमा हेमोग्लेविनको मात्रा कम भएको छ । खनाल बिहान पौने ८ बजे आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएको नर्भिक अस्पताल अस्पतालका प्रवक्ता सोमनाथ बाँस्तोलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्यमा के समस्या आएको हो भन्ने बुझ्न परीक्षण चलिरहेको …
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:०७ समाचार
काठमाडौं । सुरुङ परीक्षणका लागि मेलम्चीको पानी आउन केही समय बन्द हुने भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरणको तालिका फेरिएको छ । चैत १५ गतेदेखि वितरण शुरु गरिएको मेलम्चीको पानी हाल दैनिक १७ करोड लिटर आउने गरेको थियो । अब करिब २ महिनापछि मात्रै मेलम्चीको पानी पुनः वितरण गरिनेछ । सो अवधिसम्मका लागि काठमाडौं उपत्यकामा असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले खानेपानी वितरणको तालिका परिवर्तन …
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०९:२९ स्वास्थ्य
काठमाडौं । केहि दिनदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाए शरीर चुम्बकीय बन्ने अफवाह फैलिएपछि सरकारले यस बारेमा स्पष्ट गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले कोरोनाविरुद्धको खोपहरूमा कुनै प्रकारको धातु वा माइक्रोचिपहरू नहुने स्पष्ट गरेको हो । साथै केन्द्रले यस्ता अफवाहमा विश्वास नगर्न अपिल गरेको छ । केन्द्रले कोरनाविरुद्धको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा कुनै प्रतिकूल असर नगर्ने बताएको छ । सन्देशमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ …
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:५२ समाचार
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथामको प्रभावकारी उपाय मानिएको कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि समन्वयत्मक र आक्रामक रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा कोभिड नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति समेत हुन सकेको छैन । उता कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिएको खोप लगाउने अभियानलाई समेत सरकारले व्यापक बनाउन सकेको छैन । जसका कारण खोपको आशा गर्दै बसिरहेका आमनागरिक समयमै खोप नपाउने …
कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद अधिकारीको निधन
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:३२ समाचार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस लमजुङका पूर्व सभापति एवं पूर्वसांसद हरिभक्त अधिकारीको निधन भएको छ । विगत सात वर्षदेखि मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत रोगले थलिएर ओछ्यानमै रहेका अधिकारीलाई कोभिड संक्रमण देखिएपछि जेठ २८ गते मनमोहन मेमोरियल अस्पताल स्वयम्भूमा उपचारका लागि लगिएको थियो । उनको आइतबार राति ११ बजे निधन भएको कांग्रेस लमजुङ-काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए । वि.सं. १९९८ पुस २१ गते लमजुङको दुराडाँडामा जन्मिएका अधिकारी वि.सं. २०५६ सालको …
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:१२ विदेश
काठमाडौँ । इजरेलको संसद्ले नयाँ नेता निर्वाचित गरेपछि १२ वर्ष सत्तामा रहेका बेन्जामिन नेतान्याहुले प्रधानमन्त्री पद गुमाएका छन् । दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी नाफ्ताली बेनेटले ‘परिवर्तनको सरकार’ को नेतृत्व गर्दै शपथ ग्रहण गरेका छन् । अत्यन्तै साँघुरो ६०-५९ बहुमतका आधारमा अभूतपूर्व गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै बेनेट संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् । सत्ता समीकरणसम्बन्धी सम्झौताका अनुसार उनी सन् २०२३ को सेप्टेम्बर महिनासम्म प्रधानमन्त्री रहने छन् । त्यसपछि उनले येश अटिड पार्टीका नेता याएर लापिडलाई …
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०७:५४ समाचार
काठमाडौं । नेपालले अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति भई मध्यमस्तरको विकासशील देशका रूपमा सूचीकृत हुने मापदण्ड पूरा गरेको छ । यससम्बन्धी अन्तिम प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभाबाट पारित गर्ने तयारी रहेको छ । उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्नका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले आगामी महासभामा पेस गर्न सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ । यस पटकको राष्ट्रसंघको महासभा सेप्टेम्बर महिनामा बस्दै छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुख अमृत …
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०७:३८ समाचार
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का विद्यार्थीको परीक्षाफलसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य आगामी साउन १५ भित्र पूरा गर्ने भएको छ । विद्यालयले गरेको विद्यार्थीको अन्तिम आन्तरिक मूल्याङ्कन, जिल्ला समन्वय एकाइमा त्यसको अभिलेख तथा बोर्डबाट आवश्यक सबै कार्य पूरा गरेर साउन १५ भित्र विद्यार्थीको हातमा नतिजा दिने तयारी बोर्डले गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले एसईईको नतिजा साउन मध्यसम्म बोर्डले दिने र भदौबाट विद्यार्थीको …
1,318 पृष्ठ मध्येकॊ पृष्ठ नं 112345 » 102030...अन्तिम »